Shacabka iyo maamulka tigrayga ayaa diiddan in hubkii yaallay xadka itooboya iyo ereriye la soo qaado. | ogaden24
Shacabka iyo maamulka tigrayga ayaa diiddan in hubkii yaallay xadka itooboya iyo ereriye la soo qaado.
Hub aad u tiro badan oo yaallay xaduudka ay wadaagaan labada dal ee itoobiya iyo ereterya ayaa ku xanniban magaalada shira ee gobolka tigrayga. Maamulka tigrayga ayaa diiddan in hubka
as laga soo saaro waxa ay adeegsanayaan shacabka. Xidhiidhka maamulka tigreega iyo kan dowladda dhexe ee itoobiya ayuu xidhiidhkoo aad u liitaa, waxaa la isku maandhaafsan isbeddelka ka dhacay itoobiya iyo qaabkii loo hirgalin lahaa!
Tigrayga oo 27 sano ee la soo dhaafay itoobiya u afduubnayd ayaa talada dalka lagala wareegay sannadkii 2018-ka, waxaana itoobiya ka dhacay isbaddal, waxay u arkaan inuu halis ku yahay. Maamulkoodu waxa uu laf dhuungashay u yahay xukuumadda abiyi iyo is baddalka ba.
Reysal wasaare abiyu ayaa xannibaadda ciidanka ku sheegay mid sharci-darro ah. Tigrayga ayaa ka cabsi qaba in hubkaas iyaga loo adeegsado, haddii uu ka soo baxo gobolkooda, waxaana hadda jidka ku xanninab kolanyo gaadiidka loo yaqaan Oralka oo hubsiday!